Fayrka u baahantaha ee uu uu uu uu uu u soo guud u soo baxaa ee uu uu uu uu uu uu u soo guud u soo baxaa.
Waxaad halkan tihiin:Guri > Products > Security > Taah>Cidhibka ee la'aanta ee la'aaneysa
Keelka ee feruledaWaxaa ku yaal hantida ku mid ah ee la mid ah, laakiin xirfadda kala duduwan - ferrula la'aan, kuwaas oo isku xidhiidha khalka ay sameeyaan birka uu uu sameeyo jidhka ee rhombus. Mashruufka ee burburka ah wuxuu u dareysaa mashruumaadka aad ka dhigaytaa 3-J iyo codmooyin kala duduwan uu la socdaa.:
L Ferrule ee la'aanta ah: Beer la'aanta ah, laxab, saleyn ama aluminium.
L cable ee: dabooyinka sare AISI 304, 304L, 316, 316L.
I dhismo: 7 × 7 (1.5 mm, 2 mm ama 2.5 mm), 7 × 19 (3 mm, 4 mm)
L qiimadaa: 20 mm to 200 mm.
L cable diyaamed: 1 mm to 4 mm.
I shahaadada: ee wadamada iyo waxbarashada guryaha qaramada ku codsigaada.
Waxaa laga heli kartaa haddii xirfadda iyo waqtiga.
Cidhibka ka hortay
Cidhibka ee uheystay
IMiisado fudud iyo maroxda badan.Halqaalaha:
Cidhibka la'aanta ee uu uu ee uu ee la'aanee waa fudud, fadhida, dheeraadkeeda, shaqada shabooyinka iyo midka furan waxaa la beddeli karaa. Sidoo kale waxaa sidoo kale heli kartaa khamaad ee la'aanta. Sidaas ee uu uu uu uu uu uu sahlan u sameeyo ciyaamooyin oo dhanna waxaa lagu isticmaalaa meelo badan.
IXoog sare, ka hortaada daalinta iyo daqsiga.
Faruleyadu waxay u xidhiidha xidhiidha daboonka ah, si aad u dhigeysaa dhamaan. Sidaas oo sidaas daraadka uu uu uu ka horeeyaa daalinta iyo daqsiga.
Dhismooyinka uu dhiso 7 × 7 ama 7 × 19, waxayna ka sameeyaa xidhiidhka uu uu u baryaa. Sidaas daraaddeed waxaa loo guuri karaa oo ku qaataa, taasna uu ka gaadiid ee la'aan. Sidoo kale hantidaas wuxuu u dhashayaa in la xiriirto. Waxa wax walba ka badan, gacmo wax xumee ma dhiman doono.
IKa horeyso wanaagsan, dib u baahan lahayn iyo daawan.
Cidhibka uu uu ka sameeysaa 304, 316, 304 L ama 316L, sidaas daraad waa ka rabtaa. Dhalligiisu waxay noqon karaan 30 sano ka badan.
IAragta caafimaad iyo muuqashada weyn.
Cidhibka la'aanta ee la'aanta, si ay u yeelayn fiican weyn iyo fiican wanaagsan. Sidaas daraaddeed waxaa looga isticmaalaa shimbir ah, dabooyinka xayawaanka, dhismaasha dhiso iyo sida kale. Cidhibka ee la'aanta ee la'aanta uheeyo waa dalka weyn.
IDaryeelka lacag ah iyo saaxiibka daryeelka.
Ma jiro khalka la mas’uulka ee la'aanta ee uu uu uu uu ku jiro. Markii wakhtiga dhaqdhaqaaqo ma jiri doono. Sidaas daraaddeed uma baahna in uu dhawro. Markii la sameeyo, waxaa lagu isticmaalaa weligiis.
Goobaha shabakadda eh
Daryaa laysataysa lawsatada
Ka dambe :Gaalada xisah
Kaalmooyinka uu isticmaalaa shaduha ee uu uu uu uu aqooneeyo
Waxyaabaha uu xisaabta ee dabooyinka la'aanta ee la'aanta ee daboolka ee karbon. markii la xiriirta qalabka fiican ah ee fiican ah oo ah, waxaa lagu doortaa daryeelka ee uu uu uu sameeyo, iyo iskuud u...
Markii uu sameeyso khalka firaadka ferrule, safarka soo socda
Markii goobta ahAh, Sii u sii aqoonta waxyaabaha soo socda:1. Sida uu uu uu sameeyso ee khalka ee ferrule, xilliga ee ferrule luqada khalka ee la'aan. Si kastaba ha ahaatee, si uu uu si fiican xidhiid...
Biymaad ee xisaad ah ee uu uheyn
Intaas waxaa ku yaal shaqada dabooyinka ee dabooyinka ee la'aanta. Shambaddan oo kale ma aha mid waa xoog badan oo xiriir ah, laakiin waxaa ka buuxa adeysta iyo nolol dheeraad ah. Tusaale ahaan waxaa ...